Imwe isingazivikanwe yakatenderedza kupararira kwegoronavirus nemhedzisiro iyo inogona kuve iinayo pane itsva tech kutanga gare gare gore - kusanganisira iyo iPhone 12.
Nekuda kwekubvumidzwa kwekufamba uye kuderedzwa kwekugadzira dhodhi, hazvina kujeka kuti coronavirus ichakanganisa sei zvinhu izvozvi. Isu tinotenda kugadzirwa kwechinyorwa chitsva che iPhone yaizotanga kusvika June munguva yeSeptember yaratidza. Pave paine runyerekupe rwakati kupa zano kunonoka, asi chokwadi ndicho chakazara chisingazivikanwe parizvino.
Pave paine kufungidzira kwekamera Quad pane iyo iPhone 12 Pro Max, ne sensor TOF kana Lidar sensor sezvakaita iyo 2020 iPad Pro. Nekudaro, kubvumirana kwakawanda ndekwekuti kuve nekatatu kamera zvakare asi hongu, ine sensor nyowani. Zvakare pamwe nemodhidhio maitiro, iyo sensor nyowani ichabatsira zvakare neArKit apps.
Chii chinonzi LIDAR uye nei chiri mune iyo itsva Apple iPad?
Isu tinotarisira zvakare kuona zvimwe kuvandudzika kuUye Mode uye zvinofungidzirwa kuti Apple inogona kunge iri kuwedzera a 3D-inonzwa laser ronga kuita Portrait maitiro kunyange nani.
Iyo inonyanya kuitika mamiriro pari zvino - isu tinofunga - ndeyekuti iPhone 12 Pro uye Pro Max ichave 5G. Kunyangwe iyo standard 12 XNUMX ichave iri yekupokana uye ingangoita isingazivikanwe patiri kusvika munaGunyana.
8 Kubvumbi 2020: Mufananidzo wakasvetuka unoratidza kuti iPhone 12 Pro ichave neLiDAR sensor
It rinotaridzika iyo iPhone 12 ichava nekatatu kamera asi inowedzera iyo LiDAR sensor, sekufanana neiyo iPad Pro. Izvi zvichavandudza kugona kweAAR pamwe nekutora mifananidzo. Parutivi pacho, pachave neanogara achiitwa, ekupedzisira-pahupamhi uye nefoni serimwe neiyo iPhone 11 Pro.
12 Kurume 2020: Apple ingangoisa 3D-inonzwa kamera kumashure kweinotevera iPhone
Apple's sezviri pachena iri kuongorora mukana wekuisa a 3D sensor system pane mafoni ayo kwemakore akati wandei, asi iyo iPhone 12 inogona kuve ndiyo yekunyatsoiwana, maererano nemishumo. Kunyangwe izvi zvaizotaridzika kunge quad-kamera yuniti kana kunyatsoita zvisiri pachena hazvinzwisisike, asi chero nzira inogona kubvumira kuita kuri nani kweParrait Mode performance uye chinhu chakawedzerwa.